Bit By Bit - Ubunzima intsebenziswano - 5.5.6 iingcebiso kuyilo lokugqibela
Ukongeza kule mimiselo 5 kuyilo jikelele, ndingathanda benze nezinye ziqwenga zibini ngamacebiso. Okokuqala, basabela nangoko ukuze nazo xa sicebisa iprojekthi intsebenziswano kwembumba "Akukho mntu uza inxaxheba." Kakade ke, ukuba abe yinyaniso. Enyanisweni, ukunqongophala kwenxaxheba basengozini ukuba iiprojekthi intsebenziswano ubunzima nazo. Nangona kunjalo, oku inkcaso ngokuqhelekileyo ivela ukucinga malunga nemeko ngendlela engalunganga. Abantu abaninzi baqala kunye ngokwabo kwaye uzibalele: "Mna ndixakeke; Andisayi kuyenza loo nto. Ke, andazi mntu ukuba babeza kukwenza oku. Ngoko ke, akukho mntu uya kuyenza loo nto. "Kunokuba eqala wena nokusebenza ngaphandle, kodwa ke, kufuneka uqale bonke abemi labantu isanxulumane kwi Internet kunye umsebenzi. Ukuba kuphela 1-in-a-million kwaba bantu inxaxheba, koko iprojekthi yakho kunokuba ibe yimpumelelo. Kodwa ke, ukuba abantu kuphela 1-in-a-billion inxaxheba, koko iprojekthi yakho iya kuba yeyona lusilela. Ekubeni ncebiso yethu alilungile ukwahlula phakathi omnye-in-a-yezigidi ne one-in-a-billion, kufuneka sivume ukuba kunzima kakhulu ukwazi ukuba iiprojekthi uya kuvelisa inxaxheba eyaneleyo.
Ukwenza oku kancinane ngekhonkrithi ngakumbi, makhe sibuyele Galaxy Zoo, iprojekthi intelekelelo ngeenkwenkwezi lwabantu sikhe satsho apha kwesi sahluko. Khawube Kevin Schawinski noChris Linton, izazi ezimbini ndihleli Pub e Oxford ukucinga Galaxy Zoo. Abasoze niqashele-kwaye asikhange niqashele-ukuba Aida Berges-bahlalele-at-ekhaya umama 2 ohlala Puerto Rico-inokuphela zokuhlela amakhulu iminyele ngeveki (Masters 2009) . Okanye, cinga kwimeko kaDavide Baker, le yamachiza esebenza eSeattle ekuphuhliseni Foldit. Akanakuze bebelindele ukuba umntu evela uMcKinney, Texas ogama Scott "Boots" Zaccanelli, owayesebenza emini njengomthengi ngenxa mveliso isivalo, chitha ngokuhlwa bakhe ngokusonga iiprotheni, ekugqibeleni kukufukuka ebonisayo inani u -6 Foldit, nokuba Zaccaenlli ukuba, ngalo mdlalo, angenise yoyilo kwenga ezinzileyo ngakumbi fibronectin ukuba Baker kunye neqela lakhe bafumana ethembisa ngoko bagqiba ekubeni nokulungelelanisa kuyo lab yabo (Hand 2010) . Kakade ke, Aida Berges noScott Zaccanelli ke Nedlac, kodwa ke amandla Internet: ezigidi zabantu, nto leyo eqhelekileyo ukufumana Nedlac.
Okwesibini, kunikwa le ubunzima ukuqikelela inxaxheba, ndingathanda ukhumbule ukuba ukudala iprojekthi intsebenziswano ubunzima kunokuba yingozi. Ungayizalisa kakhulu umgudu ekwakheni inkqubo mntu uya ofuna ukuyisebenzisa. Umzekelo, bexhobile, Edward Castronova-ngumphandi ekhokelayo entsimini Economics njengamazwe enesiqhamo, kunye isibonelelo $ 250,000 ukusuka nguMacArthur Foundation, kwaye zixhaswa liqela ababhekisi-echithe phantse iminyaka emibini ezama ukwakha kwihlabathi yenyani apho yena aqhube imifuniselo kwezoqoqosho. Ekugqibeleni, imigudu yonke yaba ukungaphumeleli; mntu wayefuna ukusebenzisa ihlabathi yenyani Castonova ngayo (Baker 2008) .
Ngenxa yokungaqiniseki inxaxheba, leyo nzima ukuphelisa, Mna ndicebisa ukuba uzama ukusebenzisa start-up ubuchule ezinqinileyo (Blank 2013) : ukwakha Iiprotot ezilula usebenzisa off-the-kwithala isoftwe uze ubone ukuba unako ukubonisa ukuma phambi ngokutyala amaqashiso uphuhliso lwesoftwe siko. Ngamanye amazwi, xa uqala uvavanyo pilot, iprojekthi yakho abayi-kwaye akufuneki-akukhangeleki olugudisiweyo njengoko Galaxy Zoo okanye eBird. Ezi projekthi, njengoko kunjalo ngoku, ngaba iziphumo iminyaka umgudu amaqela amakhulu. Ukuba lwakho uza kuphumelela-yaye leyo yindlela ngokwenene ithuba-ngoko ufuna uyasilela ngokukhawuleza.